Nnyocha ọhụrụ gosiri 60% nke ụmụ okorobịa na-eto eto dara maka ụmụ nwanyị tozuru okè
Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Nnyocha ọhụrụ gosiri 60% nke ụmụ okorobịa na-eto eto dara maka ụmụ nwanyị tozuru okè
OlderWomenDating.com bụ saịtị ịkpakọrịta nkeonwe yana ọkachamara maka ụmụ nwanyị meworo agadi na-achọ ka ụmụ nwoke na-akpa. Na mbido Jenụwarị 2022, ọ jụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụ nwoke 1,000 gbasara mmasị ha nwere n'ebe ụmụ nwanyị meworo agadi nọ ka ha chọpụta ihe kpatara ndị na-alụbeghị di nwere ike ịchụso ndị mmekọ tọrọ ha. Ọ na-egosi na 60% nke ndị na-eto eto, nke afọ ọ bụla, ga-adọrọ mmasị na ndị inyom tozuru okè na ndị agadi.
Nke a bụ nhọrọ ọhụrụ maka ịhụnanya na ihunanya.
• 34% nke ụmụ okorobịa ndị dị afọ 22 ruo 25 nwere mmasị na ndị inyom meworo agadi na-ahọrọ ndị 5 ruo 10 afọ tọrọ ha.
• 25% nke ndị ikom dị afọ 25 ruo 30 nwere otu mmasị maka ndị inyom meworo agadi na-ahọrọ ka ha na-akpa ndị dị nanị afọ 3 ruo 5.
• Otú ọ dị, n'etiti ụmụ nwoke ndị toro eto nọ n'agbata afọ 30 ruo 45, ọdịiche mmasị afọ toro gụnyere ụmụ nwanyị 3 ruo 15 toro eto.
• 50% nke ndị ikom karịrị afọ 45 họọrọ ụmụ nwanyị dị naanị 1 ruo 4 afọ.
David Lufkin, onye isi oche nke OlderWomenDating.com kwuru, "Obi dị anyị ụtọ ịkpọsa nsonaazụ nyocha a na nso nso a. "A pụrụ ikwukarị na afọ bụ nanị ọnụ ọgụgụ maka ndị na-eto eto, nchọpụta anyị na-ekpughekwa ihe anọ kasịnụ mere e ji achọpụta na ndị inyom meworo okenye na-enwe mmasị n'ebe ụmụ okorobịa nọ." ọ gbakwụnyere.
N'ime otu afọ ndị a nke ụmụ nwoke nwere mmasị n'ebe ụmụ nwanyị meworo agadi nọ, otu nnyocha ahụ kpughere isi ihe anọ mere ụmụ okorobịa na-adaba adaba n'ebe ndị inyom meworo agadi na ndị tozuru okè kwa ụbọchị. Dị ka nyocha ahụ siri kwuo, ihe ndị a na-emetụta nke ọma na njirimara onwe onye na ahụmahụ nke ndị inyom meworo agadi na-ekekọrịta, gụnyere afọ ojuju na ndụ na ahụmahụ mmekọrịta, ọganihu ọrụ, nnwere onwe, na ntụkwasị obi.
Nnyocha ahụ gosipụtara ihe ndị a bụ isi ihe kpatara ụmụ nwoke ji amasị ụmụ nwanyị meworo agadi:
• Ụmụ nwanyị tozuru okè nwere ahụmahụ dị ukwuu ma a bịa ná ndụ kwa ụbọchị. Ụmụ nwanyị ndị meworo agadi nwere ahụmahụ imegharị mmekọrịta onwe onye na nke ọkachamara, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, na mmekọahụ. Ha maara ndị ha bụ na ihe ha chọrọ, ha na-adịkwa njikere ịkọrọ onye òtù ọlụlụ ahụmahụ ahụ.
• Ụmụ nwanyị tozuru okè na-abụkarị ndị nwere ahụmahụ dị elu na ngalaba ọrụ na ọrụ ha. Nye ụmụ nwoke na-eto eto, ndị inyom meworo agadi na-adịkarị ka ha nwere ọgụgụ isi na ike dị elu, nke na-eme ka ha mara mma.
• Ụmụ nwanyị tozuru okè achọtala ụzọ ha n'ụwa ma mara ka ha ga-esi nwee afọ ojuju na nnwere onwe. Ha na-enwekarị ahụ iru ala ịnọ naanị ha na ha anaghị achọ nwoke n'akụkụ ha oge ọ bụla iji nwee mmetụta zuru oke. Nnwere onwe a na-enye ike, ọ na-enyekarịkwa aka iwulite mmekọrịta dị mma na nke siri ike nke na-edozi mmekọrịta na ohere nkeonwe.
• Ụmụ nwanyị tozuru okè ekpochaala ụdị mmadụ ha na nkà mmekọrịta ha na-enwekarị, na-ahapụkarị ha ka ha na-enwe obi ike, obi ike onwe ha, na nkà mkparịta ụka dị nkọ. Ha maara otu esi emegharị nrụgide ma ọ bụ esemokwu ma soro onye òtù ọlụlụ na-ekwurịta okwu n'ụzọ nkwado.
COVID-19 enweela mmetụta ọjọọ na ndụ ịhụnanya ndị America
Ọrịa gbasara ego: Ndị America na-eto eto na ndị okenye na-agbasi mbọ ike
Mmadụ na ọdịdị. UNESCO Man and the Biosphere...
Kedu ka Nevis si atụ ndị ọbịa ya n'anya?
Aro WTN nyere UNWTO maka onye isi ihe mberede ya...